ကင်မရာမှတ်တမ်းမှာတင်ကျန်ခဲ့တဲ့ မှင်သက်မိတဲ့အခိုက်အတန့်များ - CantWait2Say
သိပ်ပြီးရှက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့မှင်သက်မိတဲ့အခိုက်အတန့်ဆိုတာ သင့်ရဲ့တဒင်္ဂအခိုက်အတန့်ကို မှတ်တမ်းတင်ခံရပြီး သင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲတနုံ့နံ့နဲ့ တွေးရင်းရှက်မိနေတဲ့အခိုက်အတန့်ပါ။နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ဒီလိုဖျတ်ခနဲမှတ်တမ်းတင်မိလိုက်တဲ့ပုံတွေဟာ မှတ်တမ်းတင်သူရဲ့ကင်မရာထဲမှာပဲရှိနေမှာထက် လိုင်းပေါ်မှာဖြန့်ရင်း တစ်စတစ်စပြန့်လာတတ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ အထူးသဖြင့် လူစုလူဝေး၊ပွဲခင်းတွေကြားမှာ သင်အမှတ်တမဲ့ပြုလုပ်မိလိုက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို သင်ဆယ်လီမဟုတ်ပေမယ့် သတိထားမိသူတွေရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိပေးလက်တို့ရင်း အင်တာနက်တ၀ှမ်းက သူတို့ကိုယ်တိုင်ရှက်စရာအကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်လို့ ခံယူထားတဲ့ပုံတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ။
1.ဘာလို့များ သူ့မျက်နှာက ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတာတုန်းကွ?
ကြည့်ရတာ ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်သွင်ပြင်အချိုးအစားကို သူသဘောမကျဘူးထင်ပါရဲ့။ဒါကြောင့် ဒီမျက်နှာပေးနဲ့ သူဆန္ဒထုတ်ဖော်လိုက်ဟန်တူပါတယ်။
ဆိုးဆို ဆင်လေးဆော့နေပုံကိုလည်း ကြည့်အုံးလေ.. zZZ
3.ဒါလည်း အားကစားအပြီး သူတို့အတွက် ပျော်စရာတစ်မျိုးထင်ပါရဲ့…
ဒီလို အလွန်အကျွံမူးရင် ထိုးအန်တတ်တဲ့သူငယ်ချင်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါလည်းအမှတ်တရတစ်ခုပါပဲနော့…. နောက်ချိန်တွေ သင်တို့ဝေးနေကြချိန်မျိုးမှာတောင် သူ့ကိုသတိရစေမယ့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့…
5.ချီးတွေပန်းလို့ ဘောင်းဘီတစ်ခုလုံးအ၀ါရောင်သမ်းလာရင်တောင် ဆက်ပြေးမယ် အရှုံးမခံဘူး ဒီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာ ငါနိုင်မှကိုဖြစ်မယ်… ဒါငါ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲပေါ်ထားတဲ့ ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲ..
ကြည့်ရတာ သူ့လက်ရှိအသက်ကို မေ့နေဟန်တူပါရဲ့.. ဒါဆို အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်က မိန်းကလေးအတွက်ပဲဖြစ်မလား? ဘိုးဘိုးအတွက်ပဲဖြစ်မလား??
7.သူကတော့ ကလေးရဲ့လက်ကိုရွယ်ပြီး သေးပန်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့.. ဒါပေမယ့် ခက်တာက ကလေးလေးကတော့ ရေဖျန်းပေးတယ်အမှတ်နဲ့ လက်ဆေးနေရော zZZ
ကြည့်ရတာ ပုံထဲက အမျိုးသားက လိင်တူချင်းစိတ်ဝင်စားတာထင်ပါရဲ့.. သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့မတော်တဆ လှုပ်ရှားလိုက်မိတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတင် သူကတော့ ရယ်ဒီဖြစ်နေပြီ..
9.အတွင်းထိထိုးဖောက်မြင်နေရတဲ့ဘောင်းဘီကြီးနဲ့ ယောဂဆော့နေတာတော့ မဟုတ်သေးဘူးကွယ်.. သူများတွေအတွက် အဆင်မပြေနိုင်ဘူး.. Zzzz
10.ပြိုင်ပွဲမှာရလဒ်ကောင်းရဖို့ကြိုးစားရင်း စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းတော့ အားရှိပါးရှိဖောက်ချပလိုက်တယ်… သေးတွေအဖြစ်နဲ့ပေါ့.. Xxx
11.ဒိလိုအိပ်တိုင်း သူများရဲ့တစ်စုံတရာကို လှမ်းကိုင်ဆုပ်ပြီးမှ အိပ်တတ်တဲ့သူတွေရှိလား?? ဒီလိုအိပ်နည်းက ပုံမကျဘူးနော်..
12.အောက်က ထိန်းကိုင်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့မျက်နှာအမူအ၇ာကိုကြည့်ရုံနဲ့ ရပ်နေတဲ့မိန်းကလေးတွေ အတွင်းကဘာမှမ၀တ်ထားဘူးဆိုတာ တန်းခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်ကွယ်…
13.မိန်းကလေးတွေပဲ ဒီလိုဝတ်လို့ ဆက်စီကျတာမဟုတ်ဘူး.. ယောင်္ကျားလေးတွေလည်း ထိုနည်းအတိုင်းဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဖော်သက်သေပြသူ…
14.ပါတီမှာကဲရင်း အရှိန်လွန်မထိန်းနိုင်တော့တဲ့အဆုံး ဒီလိုတွေထွက်ကျလာတော့ ဘေးနားကကဲနေသူတွေ ဘလိုဖျတ်ဖျတ်လူးနေမလဲ တွေးသာကြည့်တော့… :3
15.အယုံမလွယ်ကြပါနဲ့.. အနောက်ကမှန်ကိုပဲ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အုံး..
သိပျပွီးရှကျစရာအကောငျးဆုံးနဲ့မှငျသကျမိတဲ့အခိုကျအတနျ့ဆိုတာ သငျ့ရဲ့တဒင်ျဂအခိုကျအတနျ့ကို မှတျတမျးတငျခံရပွီး သငျကိုယျတိုငျစိတျထဲတနုံ့နံ့နဲ့ တှေးရငျးရှကျမိနတေဲ့အခိုကျအတနျ့ပါ။နညျးပညာတိုးတကျလာတာနဲ့အမြှ ဒီလိုဖတျြခနဲမှတျတမျးတငျမိလိုကျတဲ့ပုံတှဟော မှတျတမျးတငျသူရဲ့ကငျမရာထဲမှာပဲရှိနမှောထကျ လိုငျးပျေါမှာဖွနျ့ရငျး တဈစတဈစပွနျ့လာတတျကွပါတယျ။ဆိုတော့ အထူးသဖွငျ့ လူစုလူဝေး၊ပှဲခငျးတှကွေားမှာ သငျအမှတျတမဲ့ပွုလုပျမိလိုကျတဲ့ လှုပျရှားမှုတိုငျးကို သငျဆယျလီမဟုတျပမေယျ့ သတိထားမိသူတှရှေိနနေိုငျတယျဆိုတာကို သတိပေးလကျတို့ရငျး အငျတာနကျတဝှမျးက သူတို့ကိုယျတိုငျရှကျစရာအကောငျးဆုံးအခိုကျအတနျ့လို့ ခံယူထားတဲ့ပုံတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ ။
1.ဘာလို့မြား သူ့မကျြနှာက ငိုမဲ့မဲ့ဖွဈနတောတုနျးကှ?
ကွညျ့ရတာ ဒီအမြိုးသမီးရဲ့ ခန်ဓာကိုယျသှငျပွငျအခြိုးအစားကို သူသဘောမကဘြူးထငျပါရဲ့။ဒါကွောငျ့ ဒီမကျြနှာပေးနဲ့ သူဆန်ဒထုတျဖျောလိုကျဟနျတူပါတယျ။
ဆိုးဆို ဆငျလေးဆော့နပေုံကိုလညျး ကွညျ့အုံးလေ.. zZZ
3.ဒါလညျး အားကစားအပွီး သူတို့အတှကျ ပြျောစရာတဈမြိုးထငျပါရဲ့…
ဒီလို အလှနျအကြှံမူးရငျ ထိုးအနျတတျတဲ့သူငယျခငျြးရှိတယျဆိုရငျတော့ ဒါလညျးအမှတျတရတဈခုပါပဲနော့…. နောကျခြိနျတှေ သငျတို့ဝေးနကွေခြိနျမြိုးမှာတောငျ သူ့ကိုသတိရစမေယျ့ ဖွဈရပျတဈခုအနနေဲ့ပေါ့…
5.ခြီးတှပေနျးလို့ ဘောငျးဘီတဈခုလုံးအဝါရောငျသမျးလာရငျတောငျ ဆကျပွေးမယျ အရှုံးမခံဘူး ဒီမာရသှနျပွိုငျပှဲမှာ ငါနိုငျမှကိုဖွဈမယျ… ဒါငါ့ရဲ့ပွိုငျပှဲပျေါထားတဲ့ ပွငျးပွတဲ့စိတျဓာတျပဲ..
ကွညျ့ရတာ သူ့လကျရှိအသကျကို မနေ့ဟေနျတူပါရဲ့.. ဒါဆို အံ့သွစရာကောငျးတဲ့အခိုကျအတနျ့က မိနျးကလေးအတှကျပဲဖွဈမလား? ဘိုးဘိုးအတှကျပဲဖွဈမလား??
7.သူကတော့ ကလေးရဲ့လကျကိုရှယျပွီး သေးပနျးနတောတော့မဟုတျဘူးပေါ့.. ဒါပမေယျ့ ခကျတာက ကလေးလေးကတော့ ရဖေနျြးပေးတယျအမှတျနဲ့ လကျဆေးနရေော zZZ
ကွညျ့ရတာ ပုံထဲက အမြိုးသားက လိငျတူခငျြးစိတျဝငျစားတာထငျပါရဲ့.. သူ့သူငယျခငျြးရဲ့မတျောတဆ လှုပျရှားလိုကျမိတဲ့အခိုကျအတနျ့မှာတငျ သူကတော့ ရယျဒီဖွဈနပွေီ..
9.အတှငျးထိထိုးဖောကျမွငျနရေတဲ့ဘောငျးဘီကွီးနဲ့ ယောဂဆော့နတောတော့ မဟုတျသေးဘူးကှယျ.. သူမြားတှအေတှကျ အဆငျမပွနေိုငျဘူး.. Zzzz
10.ပွိုငျပှဲမှာရလဒျကောငျးရဖို့ကွိုးစားရငျး စိတျလှုပျရှားလှနျးတော့ အားရှိပါးရှိဖောကျခပြလိုကျတယျ… သေးတှအေဖွဈနဲ့ပေါ့.. Xxx
11.ဒိလိုအိပျတိုငျး သူမြားရဲ့တဈစုံတရာကို လှမျးကိုငျဆုပျပွီးမှ အိပျတတျတဲ့သူတှရှေိလား?? ဒီလိုအိပျနညျးက ပုံမကဘြူးနျော..
12.အောကျက ထိနျးကိုငျထားတဲ့ မိနျးကလေးတှရေဲ့မကျြနှာအမူအရာကိုကွညျ့ရုံနဲ့ ရပျနတေဲ့မိနျးကလေးတှေ အတှငျးကဘာမှမဝတျထားဘူးဆိုတာ တနျးခနျ့မှနျးလို့ရပါတယျကှယျ…
13.မိနျးကလေးတှပေဲ ဒီလိုဝတျလို့ ဆကျစီကတြာမဟုတျဘူး.. ယောကငြ်ျားလေးတှလေညျး ထိုနညျးအတိုငျးဆိုတာကို ကိုယျတိုငျသရုပျဖျောသကျသပွေသူ…
14.ပါတီမှာကဲရငျး အရှိနျလှနျမထိနျးနိုငျတော့တဲ့အဆုံး ဒီလိုတှထှေကျကလြာတော့ ဘေးနားကကဲနသေူတှေ ဘလိုဖတျြဖတျြလူးနမေလဲ တှေးသာကွညျ့တော့… :3
15.အယုံမလှယျကွပါနဲ့.. အနောကျကမှနျကိုပဲ တဈခကျြကွညျ့လိုကျအုံး..
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အထူးခြားဆုံးမြို့5 မြို့ 
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အထူးခြားဆုံးမြို့5 မြို့1.မြို့ သူမြို့ သားများထက် အလောင်းအရေအတွက် များနေသောမြို့California ပြည်နယ်ရှိ Colma မြို့ သည် သင်္ချိုင်း 17 ခု စုစည်းနေသော မြို့ ဖြစ်သည်။ အလောင်း …
ဖုန်းတွေမှာ သူတို့နဲ့ သင့်တော်တဲ့ အားသွင်းကြိုးတွေသာ အားသွင်းလို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းချင်းမတူတဲ့ အားသွင်းကြိုးချင်းမတူတဲ့ဟာကို လဲလှယ်သုံးမယ်ဆိုရင် ဖုန်းဘက်ထရီကို ထိခိုက်စေသလို ဘက်ထရီအပိတ်တွေဆို ဖုန်းကိုကြောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်အားသွင်းကြိုးပျက်သွားလည်း ကိုယ့်ဖုန်းကုမ္ပဏီက ထုတ်တဲ့အားသွင်းကြိုးသာ ရွေးဝယ်သင့်ပါတယ်။ ဖုန်းတေါကို အားသွင်းကြိုးတပ်ပြီးသုံးတာကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဆိုးကျိုးများစွာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အားသွင်းကြိုးတပ်ပြီး လိုင်းသုံးတာက ဘက်ထရီကို အကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားစေနိုင်သလို ကြိုးတပ်ပြီး ဖုန်းပြောတာက …
Coca-Cola လိုဂိုမှာ အနီရောင် အသုံးပြုရခြင်း ရဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း
ကိုကာကိုလာ လို့ ဆိုလိုတာနဲ့ လူတိုင်း လူတိုင်းရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပလတ်စတစ်ဘူးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သံဘူးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖန်ပုလင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် အနီရောင် အောက်ခံမှာ “Coca-Cola” လို့ ရေးထားတဲ့ အဖြူရောင် စာသားလေးကို တွဲဖက် မှတ်မိနေကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Coca-Cola လိုဂိုမှာ …